IONITY, inethiwekhi yeetshaja ezinkulu ezifuna ukusasazeka kuyo yonke iYurophu | Iindaba zeGajethi
Ikamva lecandelo leemoto lihamba ngezithuthi zombane. Asikutsho oku, kodwa eyona nto iphambili kwicandelo kubheja kakhulu kolu hlobo lwesithuthi. Kwaye abanye babo, uninzi lwaseJamani, bafuna ukuma kwizikhululo zokutshaja zikaTesla. Bayile le nto IONITY, isicwangciso esifuna ukuvula izitishi ezingama-400 eziphezulu kwiYurophu.
Njengoko echaza Reuters, IONITY yenziwe kwaye yenziwa yi-BMW, ​​Mercedes, Ford kunye neVolkswagen (eyokugqibela inamasebe abo eAudi kunye nePorsche). Ezi ntengiso zifuna ukubeka itotali Izikhululo ezingama-400 kuyo yonke iYurophu kude kube ngu-2020. Ngeli xesha, phambi kokuphela kwalo nyaka ka-2017, izitishi zokuqala ezingama-20 ziya kuvulela uluntu. Amazwe okuqala anakho ukonwabela ezi zitishi zeshaja zale mihla ziya kuba yiNorway, iJamani neOstriya.
Kwelinye icala, abayi kuhlawulisa kuphela izikhululo zekamva, kodwa i-CEO yabo (uMichael Hajesch) naye uphawule ukuba Izikhululo ziya kuhambelana nentlawulo yedijithali; Oko kukuthi, iinkqubo ezinje nge-Apple Pay, i-Samsung Pay okanye i-Android Pay iya kuba ngabalinganiswa abaphambili xa kusenziwa ukwenza iintlawulo ngokukhawuleza nangokuthembekileyo.
Kwangokunjalo, IONITY ikwintetho neenkampani ezahlukeneyo ukuze kuqalwe iprojekthi. Izigidi ezininzi ziyafuneka kutyalo-mali, nangona inani elithile linganikwanga, kodwa kuye kwachazwa ukuba itshaja nganye inexabiso lama-200.000 eeuros.
Ngakolunye uhlangothi, Ekupheleni kuka-2018, izitishi ezilikhulu kulindeleke ukuba zivuleke, zibonelele ngenkonzo epheleleyo. U-IONITY ufuna ukuma kwiiTesla Supercharger. Indawo nganye yokutshaja iya kuba namandla e-350 kW kwaye iya kusebenzisa umgangatho waseYurophu ukunciphisa amaxesha okutshaja xa kuthelekiswa nezikhululo zangoku. Ukukunika umzekelo, ngemizuzu engama-30 yokutshaja, imoto kaTesla kuya kufuneka ihambe ngaphezulu kwe-270 yeekhilomitha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » IONITY, uthungelwano lweetshaja ezinkulu ezifuna ukwandisa kulo lonke elaseYurophu
I-iPhone X isezandleni zethu, iselfowuni yekamva langoku
Isityalo sokuqala esikwaziyo ukuguqula i-CO2 elityeni sele sisebenza